Abathengisi Bangazuza Kanjani Emathubeni Wezentengiselwano Emhlabeni Wonke kulo Khisimusi? | Martech Zone
Abathengisi Bangazuza Kanjani Emathubeni Wezentengiselwano Emhlabeni Wonke kulo Khisimusi?
NgoLwesithathu, uDisemba 2, 2015 NgoLwesithathu, uDisemba 2, 2015 UNir Debbi
Ngemakethe yomhlaba wonke ye-ecommerce enqamula umngcele manje esenenani £ 153bn ($ 230bn) ngo-2014, futhi kulindeleke ukuthi inyuke iye ku- £ 666bn ($ 1 trillion) ngo-2020, ithuba lebhizinisi labathengisi base-UK alikaze libe likhulu. Abathengi bamazwe omhlaba baya ngokuya bethanda ukuthenga emakhaya abo futhi lokhu kuyaheha kakhulu ngesikhathi samaholide, ngoba kugwema izixuku ezinkulu kanye nengcindezi yokuthi ukuthenga ngoKhisimusi kuhlanganisa.
Ucwaningo kusuka Inkomba ye-Adobe's Digital Index iphakamisa ukuthi isikhathi samaholide salo nyaka manje simele ama-20% emali esetshenziswayo emhlabeni wonke online. Ngokunikezwa kukaKhisimusi ucezu olukhulu lwemali kubathengisi, ama-brand ambitious adinga ukuqiniseka ukuthi anezinqubo ezifanele zokusebenzisa leli thuba online - hhayi ekhaya kuphela, kodwa naphesheya kwezilwandle.
I-ecommerce yamazwe omhlaba ithembisa inzuzo enkulu kakhulu kubathengisi njengoba inikela ngemikhiqizo ikhono elingakaze libonwe lokukhulisa amabhizinisi ngokushesha emazweni omhlaba, ibenze bakwazi ukunikela ngezimpahla zabo kumakhasimende ezimakethe zangaphandle, ngaphandle kwesidingo sokubakhona ngokomzimba. Ukuzibophezela ekunikezeni ulwazi lokuthenga olungenamthungo kuzoba amandla okuthengisa online online kulo Khisimusi.
Inkinga ukuthi, abathengisi abaningi bavame ukubanzima ukufanisa ukuthengisa okuhlaba umxhwele kwezwe ezimakethe zomhlaba. Lokhu kungenxa yezithiyo ezahlukahlukene ezinqamula imingcele ye-ecommerce njengezinga eliphezulu lokuthumela, intela yokungenisa engaziwa, izimbuyiselo ezingasebenzi kahle, nobunzima bokuxhasa izimali zendawo nezindlela zokukhokha. Lezi zinkinga zithatha isisindo esisha esimweni sokuncintisana sikaKhisimusi lapho insizakalo yamakhasimende empofu izothumela abathengi kwenye indawo.
Umthetho obalulekile wokuhwebelana kwamazwe omhlaba ukuthi, ukuze uphumelele, amakhasimende kufanele ajabulele umuzwa omuhle wokuthenga kungakhathalekile ukuthi ukuphi. Abathengisi akufanele neze baphathe amakhasimende anqamula imingcele njengesigaba sesibili. Ukugcina amakhasimende aphesheya ehlanganyela, abathengisi kudingeka baqiniseke ukuthi ukunikezwa kwabo kwezifunda kulula, kwenziwa okwasendaweni futhi kusobala.
Lokhu okucatshangelwa okune kuyisidingo:
Yiba nezinketho eziningi zokuthumela ngamanani afanele. Kuxhunyaniswe nalokhu, ukuhlinzeka ngenqubo yokubuyisa elula futhi engenabungozi kubalulekile kuwo wonke amakhasimende njengoba iwafaka ngokuzethemba ukuthenga nawe online.
Nikeza imali yendawo; kunezinto ezimbalwa ezingasetshenziswa kubathengi be-inthanethi kunesidingo sokubala izindleko ngemali yabo ngenkathi upheqa, kungasaphathwa ukungaqiniseki kwezinga lokushintshisana.
Ngaso sonke isikhathi hlose ukubeka ingqondo yekhasimende ngokukhululeka. Gwema noma yiziphi izimanga ezingaba khona ezimbi kumakhasimende (isb. Izindleko zamasiko nezimali zokubamba ezivela kubathwali) ngokuba phambili kulezi zindleko.
Ezimweni eziningi, gwema ukuhumusha okuqukethwe kwewebhusayithi yakho noma ukwakha amasayithi asendaweni. Le misebenzi idinga ukutshalwa kwezimali okuphezulu futhi imvamisa ikhiqiza ukubuya okuphansi, ngakho-ke, yeka noma yisiphi isenzo kuze kube yilapho usuzibonisile ngempela emakethe.
AbakwaBrands abakwazi ukungalinaki ithuba le-ecommerce eliwela imingcele kulo Khisimusi. Ukufeza lokhu akudingi isikhathi esiningi kanye nokutshalwa kwezimali ngaphakathi endlini; abathengisi bangathola umlingani womhlaba wonke ukuze ahlinzekele kangcono izidingo zabo futhi ahlangabezane nokulindelwe ukuthengiswa kwamazwe omhlaba, okwenza i-ROI yokuthola okuhle emhlabeni
Abalingani bezobuchwepheshe bathanda Umhlaba-e ingaxhasa abathengisi ekuhlinzekeni ngesipiliyoni se-ecommerce yamazwe omhlaba futhi inikeze amakhasimende izinga lensizakalo elibalulekile emakethe yokuthengisa yokuncintisana. Ngaphandle kokuqinisekiswa kokuhlangenwe nakho kwasendaweni, izikhathi ezinembile zokulethwa noma ukunemba okuzungeze izindleko zokuthengisa, abathengisi bazongena futhi babone abathengi babo belahla okuthengiwe noma bathuthele esizeni somncintiswano ngendaba yokuchofoza - hhayi ingozi ofuna ukuyithatha amakhasimende akho kulo Khisimusi!
Tags: I-christmasumhlaba-eiholideukuthunyelwa kwamanye amazweamazwe omhlabaimali yendawotekutsengisalokuthumela ratesukuhumushaukuhumusha iwebhusayithi
UNir Debbi ungumsunguli kanye neNhloko Yezokuthengisa Nezokumaketha e Umhlaba-e. UNir uneminyaka engaphezu kwengu-10 enesipiliyoni ekuhleleni amasu nasekuthuthukiseni amabhizinisi emikhakheni yezobuchwepheshe obuphezulu neyezezimali. Ngaphambi kokusebenzisana no-Global-e, ubesebenza njenge-SVP, iNhloko yeQhinga kanye neBizDev e-Bank Hapoalim, kulandela isikhathi sokuba yiNhloko yeRetail Strategy yaleli bhange. Ubuye abe ne-MBA neB.Sc. Kwezomnotho, zombili ezivela eNyuvesi yaseTel-Aviv.
Izindlela eziyi-11 zokwandisa i-ROI Yokumaketha Kwakho Okuqukethwe
Izisekelo ze-Twitter: Ungayisebenzisa kanjani i-Twitter (yabaqalayo)